Dhakhtar been abuur ah oo kufsaday in ka badan 100 haween ah, kana helay 85 kun oo dollars! – Filimside.net
Taariikhda: November 28, 2017
Boliiska dalka Japan ayaa xabsiga dhigay dhakhtar been abuur ah, kaasoo dumarka ku dura cirbado maandooriye ah ka dibna si sharci darro ah ugu galmooda.
Dhakhtarkaan been abuurka ah ayaa lagu eedeeyey inuu si sharci darro ah ugu galmooday in ka badan 100 haween ah, isagoo ku duraya cirbado miyirka daboola ka dibna siduu rabo ka yeelanaya… Dumarkaas ayaana u badan kuwo uu u sheegay inuu siin doono tababar dhanka caafimaadka ah.
Saraakiisha Boliiska ee sida gaarka ah loogu xilsaaray kiiskaan ayaa warbaahinta u sheegay in 54 sanno jirkaan oo lagu magacaabo Hideyuki Noguchi uu dumarka ku duro cirbado hurdeysiiya ama suuxiya isagoo ugu yeeraya hoteello ama goob uu isagu maamulo, marka ay miyir la’aan noqdaanna wuxuu ka duubaa muuqaal isagoo u galmoonaya.
Ka dibna Hideyuki Noguchi ayaa wuxuu muuqaalladaas soo dhigaa Internet-ka ama wuxuu ka iibiyaa ragga maalgeliya aflaanta galmada ah, taasoo keentay inuu Noguchi ka sameeyo dhaqaale dhan 10 milyan oo lacagta yen ee dalka Japan ah taasoo u dhiganta 85 kun oo dollars.
Si kastaba ha ahaatee, lama hubo haddii Noguchi uu soo qaatay tababar dhanka caafimaadka ah, mana ahan dhakhtar shati heysta. Afhayeen u hadlay Boliiska ayaana daaha ka qaaday in dumarka uu dhakhtartaan been abuurka ah dembiga ka galay ay sarre u dhaafayaan 100 shaqsi, balse ay usoo dacwoodeen 39 ka mid ah, kuwaasoo dhallinyaro u badan isla markaana degaankoodu Tokyo, Chiba, Osaka, Tochigi iyo Shizuoka.
Waxaa Aqrisay 1,003